सहवासमा स्त्री र पुरुषमध्ये कसलाई बढी आनन्द आउँछ? शास्त्र यसाे भन्छ … – Rastriyapatrika
धिष्ठिरलाई एउटा जिज्ञासाले पेट पोलिरहेको थियो लामो समयदेखि। त्यो के भने समागमको समय स्त्री र पुरुषमध्ये कसलाई बढी आनन्द प्राप्त हुन्छ होला भनेर युधिष्ठिरले निष्कर्ष निकाल्न सकेनछन्। सोध्‍ने पो कसलाई? अन्तमा उनको नजरमा भीष्म नै परेछन्। युधिष्ठिरलाई लागेन कि यी ब्रह्मचारीलाई स्त्रीसँगका कुरा के थाहा भनेर। भीष्मले पनि आफूलाई अनुभव नभएको कुरामा केही बताउन नसक्ने भनेनछन्। बरू सुनाएछन् एउटा कथा भंगस्वानाको। भीष्मले पढेका थिए नि आखिर, परेको पो थिएन।